SADDEXDA Shaxood Ee Manchester United Ay Kula Ciyaari Karto LASK Linz Kulanka Europa League Ee Caawa - Gool24.Net
SADDEXDA Shaxood Ee Manchester United Ay Kula Ciyaari Karto LASK Linz Kulanka Europa League Ee Caawa
August 5, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Manchester United ayaa caawa garoonkeeda Old Trafford ku qaabilaysa naadiga LASK Linz oo ay isku haleelayaan lugta labaad ee wareegga 16ka Europa League.
Ole Gunner Solskjaer ayay kooxdiisu kusoo adkaatay 5-0 lugtii hore ee ay LAZK martida u ahaayeen oo la ciyaaray bishii March, waxaana kooxda reer Austria ay Old Trafford timid iyadoo aan rajo badan lahayn, isla markaana ay Red Devils iska tahay koox gudubtay oo kaliya dhamaysanaysa kulamadeeda sharciga ah.
Guusha weyn ee ay haystaan darteed, Ole Gunnar Solskjaer waxa la filayaa inuu fursad siiyo ciyaartoyda aan waqtiga badan helin kulamadii ugu dambeeyay, sababtoo ah wax cabsi ah kama qabo inay soo gudbayaan.
Laacibkii u dhaliyey goolkii ugu dambeeyey horyaalka Premier League xili ciyaareedkii dhowaanta dhamaaday ee Jesse Lingard ayaa la filayaa inuu kusoo bilaaban doono, waxaase aan ciyaartan fursad u haysanin Luke Shaw iyo Axel Tuanzebe oo labaduba dhaawac ah.
Goolhaye Sergio Romero oo kulamada Europa League iska lahaa ayaan lagu qabsan doonin goolka, waxaana sii caawinaya qaladaadkii uu sameeyey David de Gea kulankii semi-finalka FA Cup ee Chelsea, taas oo uu ku lumiyey fursad kasta oo uu Romero cidhiidhi ku gelin lahaa kulamada Europa League.
Tede Mengi ayaa noqonaya xiddiga lama filaanka ku noqonaya ciyaartan ee uu tababare Ole Gunnar Solskjaer ciyaartii ugu horreysay dheelsiinayo, waxaa se la filayaa inuu isaguna waqti helo Diogo Dalot, halka Ethan Laird uu rajaynayo inuu booska la wadaago Brandon Williams.
James Garner oo bandhig layaab lahaa sameeyey kulankii hore ee Europa League, waxa suurtogal ah in khadka dhexe ay wadaagaan Fred, iyadoo ay sidoo kale fursadahooda doonayaan Lingard, Juan Mata, Daniel James iyo Odion Ighalo.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer waxa uu ku ciyaari karaa saddex shaxood maadaama uu ciyaartoygiisa oo dhan wada haysto, waxaanay kala yihiin sidan: